बीपीएलमा आज सन्दीपको टोलीको तेस्रो खेल, जित निकाल्न कति मुस्किल ? – Everest Dainik
बीपीएलमा आज सन्दीपको टोलीको तेस्रो खेल, जित निकाल्न कति मुस्किल ?
काठमाडौं, पुष २८ । बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) अन्तर्गत आज सन्दीप लामिछानेको टोली सिल्हेट सिक्सर्सको तेश्रो खेल ढाका डाइनामाइट्स विरुद्ध हुँदैछ । खेल नेपाली समयअनुसार नेपाली समयअनुसार आज साँझ ६ः१५ बजे शुरु हुनेछ ।
पहिलो खेलमा पराजित भए पनि दोश्रो खेलमा ५ रनको जितसहित २ अंक निकाल्दै अंक तालिकाको चौथो स्थानमा रहेको सिल्हेटले तेश्रो खेलमा बलियो प्रतिद्वन्दीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
सकिब अल हसनको कप्तानीमा रहेको ढाकाले यसअघि खेलेको दुबै खेल जितेको छ । स्टार खेलाडी सुनिल नारिन, इयान बेल, काइरोन पोलार्ड, आन्द्रे रसेल र अफगानिस्तानका उदियीमान खेलाडी हज्रतुल्लाह जजाईले सुसज्जित ढाकामा सकिबका अलावा रुबेल होसेन, शुभागाता होम र शहादत होसेन जस्ता राम्रा घरेलु खेलाडी पनि रहेका छन् ।
बलियो ढाका विरुद्ध डेभिड वार्नरको कप्तानीमा रहेको सिल्हेटको उत्कृष्ट प्रदर्शनको आवश्यकता रहेको छ । सिल्हेटमा रहेका विदेशी खेलाडीहरुले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेपनि बंगलादेशी खेलाडीहरुले अपेक्षाकृत प्रदर्शन नगर्दा टोलीले बलियो प्रदर्शन गर्न चुकिरहेको छ ।
कप्तान वार्नर, ब्याटसम्यान निकोलस पुरन र स्पीनर सन्दीप लामिछानेले अहिलेसम्म उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानी बलर मोहम्मद इरफानले पनि सुरुवाती ओभरमा राम्रै गरेपनि अन्तिम ओभरहरुमा धेरै रन खर्चिनाले पहिलो खेलमा जितको नजिक पुगेपनि पराजित हुनु परेको थियो भने दोश्रो खेल पनि सहजै जित्नुपर्नेमा हारको नजिक पुगेको थियो ।
युवा खेलाडी आफिफ हुसेनले भने अघिल्लो खेलमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए । अघिल्लो खेलमा सन्दीपले किफायती बलिङ गरेपनि विकेट भने लिन सकेका थिएनन् । फिल्डीङको क्रममा भने एकजना खेलाडीलाई सिधा थ्रो मार्फत् आउट पारेका थिए ।
आज सन्दीपको सम्भावना कति ?
आजको खेलमा सन्दीपले स्थान पाउने सम्भावना ५० प्रतिशत छ । पहिलो खेलमा शानदा प्रदर्शन गर्दै २ विकेट लिए पनि दोस्रो खेलमा भने उनले विकेट लिन सकेनन् । तथापि उनको फिल्डीगं उत्कृष्ट रह्यो ।
दोस्रो खेलमा उनले बिनाविकेट २१ रन खर्चिए । दोस्रो खेललाई मध्येनजर गर्दै सन्दीपले आज स्थान पाउन केही अप्ठ्यारो छ । दुई खेलमा बेन्चमा बसेका दक्षिण अफ्रिकाका अनुभवी स्पिनरलाई आज टीममा समावेश गर्ने सम्भावना छ ।